ကရူးစ်ရဲ့ အနိုင်ဂိုးကြောင့် အုပ်စုကတက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းသွားတဲ့ ဂျာမနီ
Reus (48' minutes),Kroos (90'+5 minutes) FT Toivonen (32' minutes)
ကရူးစ် Kroos ရဲ့ အနိုင်ဂိုးကြောင့် အုပ်စုကတက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းသွားတဲ့ ဂျာမနီ
24 Jun 2018 . 3:33 AM
ဂျာမနီကွင်းလယ်လူ ကရူးစ် Kroos ကတော့ ဗီလိန်ကနေ ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖွင့်ဂိုးက သူ့ရဲ့လူပေးမှားမှု၊ Marking ညံ့ဖျင်းမှုတို့ကြောင့် ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပေမယ့် အရေးပါတဲ့(၃)မှတ်ကို လှပတဲ့ ဖရီးကစ်သွင်းဂိုးနဲ့ ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီအသင်းနည်းပြ ဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low ရဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါ။ မက္ကဆီကိုနဲ့ပွဲတုန်းက လူစာရင်းကို အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ခဲ့ပြီး အိုဇေးလ် Ozil ၊ ခီဒီရာ Khedira တို့ကို အရန်ခုံပို့ခဲ့သလို ရူဒီ Rudy ၊ မာကိုရွိုက်စ် Marco Reus တို့ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဂျာမနီ ကွင်းလယ်က အားနည်းချက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ပွဲအစပိုင်းမှာ ဆွီဒင်အသင်းက Counter ကနေ အပိုင်အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့သာ ဂျာမနီ ကံကောင်းခဲ့တယ်။
(၃၂)မိနစ်မှာ ဂျာမနီအသင်း ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်။ ကွင်းလယ်လူ ကရူးစ်ရဲ့ ပေါ့ဆတဲ့ဘောလုံးပေးမှုကနေ ဆွီဒင် တောင်ပံကစားသမား ကလာဆန် Claesson က ဖန်တီးပေးတာကို တွိုင်ဗိုနန် Toivonen က ပါးပါးနပ်နပ် ကန်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဂိုးပေးလိုက်ရပြီး ဂျာမနီအသင်း ကစားအားတင်ကစားခဲ့ပေမယ့် ဆွီဒင်ရဲ့ Counter Attacking ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ မကြာခဏဆိုသလို အခွင့်အရေးတွေ ပေးခဲ့ရတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဂျိုအာချင်လိုးက ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ ဒရက်ဇ်လာ Draxler အစား မာရီယိုဂိုးမက်ဇ် Mario Gomez ကို လူစားလဲခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းစလို့ (၃)မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲ ဂျာမနီ ချေပဂိုးပြန်ရခဲ့တယ်။ မာရီယိုဂိုးမက်ဇ်ရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ မာကိုရွိုက်စ်က အပိုင်ပိတ်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဒုတိယပိုင်းမှာ ဂျာမနီတို့ ဆွီဒင်ကို ဖိကစားခဲ့ပေမယ့် အပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ ရခဲ့တာက ဆွီဒင်ပါပဲ။ ဂိုးသမား နူအာ Neuer လက်စွမ်းပြခဲ့လို့ ဂိုးမပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်(၇၀)နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆွီဒင်တို့ ခံစစ်သက်သက်ကစားခဲ့ချိန်မှ ဂျာမနီ အခွင့်အရေးတွေ ပြန်ရခဲ့ပြီး ဆွီဒင် ဂိုးသမား အော်လ်ဆန် Olsen နဲ့ ခံစစ်ကစားသမားတွေ အသည်းအသန်ကာကွယ်ခဲ့ရတယ်။ ဘရန့်တ် Brandt ရဲ့ ကန်ချက် တိုင်ထိခဲ့ပြီး၊ ဂိုးမက်ဇ်ရဲ့ အပိုင်ခေါင်းတိုက်ချက်ကို အော်လ်ဆင် အံ့အားသင့်စရာကောင်းအောင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီအသင်းအနေနဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားက စပိန်အသင်းရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်ရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် Injury Time နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ကရူးစ်က လှပတဲ့ Free Kick ကန်ချက်နဲ့ အနိုင်ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ အုပ်စုက တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ပြန်ရှင်သန်လာခဲ့တယ်။
ကရူးဈ Kroos ရဲ့ အနိုငျဂိုးကွောငျ့ အုပျစုကတကျဖို့ အခွအေနကေောငျးသှားတဲ့ ဂြာမနီ
ဂြာမနီကှငျးလယျလူ ကရူးဈ Kroos ကတော့ ဗီလိနျကနေ ဟီးရိုးဖွဈခဲ့တယျ။ အဖှငျ့ဂိုးက သူ့ရဲ့လူပေးမှားမှု၊ Marking ညံ့ဖငျြးမှုတို့ကွောငျ့ ပေးခဲ့ရတာဖွဈပမေယျ့ အရေးပါတဲ့(၃)မှတျကို လှပတဲ့ ဖရီးကဈသှငျးဂိုးနဲ့ ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနီအသငျးနညျးပွ ဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low ရဲ့ ပှဲထှကျလူစာရငျးကတော့ အံ့အားသငျ့စရာပါ။ မက်ကဆီကိုနဲ့ပှဲတုနျးက လူစာရငျးကို အပွောငျးအလဲတှလေုပျခဲ့ပွီး အိုဇေးလျ Ozil ၊ ခီဒီရာ Khedira တို့ကို အရနျခုံပို့ခဲ့သလို ရူဒီ Rudy ၊ မာကိုရှိုကျဈ Marco Reus တို့ကို ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့တယျ။ အပွောငျးအလဲလုပျခဲ့ပမေယျ့လညျး ဂြာမနီ ကှငျးလယျက အားနညျးခကျြတှရှေိနဆေဲဖွဈပွီး ပှဲအစပိုငျးမှာ ဆှီဒငျအသငျးက Counter ကနေ အပိုငျအခှငျ့အရေးတှရေခဲ့ပမေယျ့ အသုံးမခနြိုငျခဲ့လို့သာ ဂြာမနီ ကံကောငျးခဲ့တယျ။
(၃၂)မိနဈမှာ ဂြာမနီအသငျး ဂိုးပေးလိုကျရတယျ။ ကှငျးလယျလူ ကရူးဈရဲ့ ပေါ့ဆတဲ့ဘောလုံးပေးမှုကနေ ဆှီဒငျ တောငျပံကစားသမား ကလာဆနျ Claesson က ဖနျတီးပေးတာကို တှိုငျဗိုနနျ Toivonen က ပါးပါးနပျနပျ ကနျသှငျးခဲ့တာပါ။
ဂိုးပေးလိုကျရပွီး ဂြာမနီအသငျး ကစားအားတငျကစားခဲ့ပမေယျ့ ဆှီဒငျရဲ့ Counter Attacking ကို မထိနျးခြုပျနိုငျဘဲ မကွာခဏဆိုသလို အခှငျ့အရေးတှေ ပေးခဲ့ရတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာ ဂြိုအာခငျြလိုးက ခွစှေမျးမပွနိုငျတဲ့ ဒရကျဇျလာ Draxler အစား မာရီယိုဂိုးမကျဇျ Mario Gomez ကို လူစားလဲခဲ့ပွီး ဒုတိယပိုငျးစလို့ (၃)မိနဈလောကျအကွာမှာပဲ ဂြာမနီ ခပြေဂိုးပွနျရခဲ့တယျ။ မာရီယိုဂိုးမကျဇျရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ မာကိုရှိုကျဈက အပိုငျပိတျသှငျးခဲ့တာပါ။
ဒုတိယပိုငျးမှာ ဂြာမနီတို့ ဆှီဒငျကို ဖိကစားခဲ့ပမေယျ့ အပိုငျဂိုးသှငျးခှငျ့တှေ ရခဲ့တာက ဆှီဒငျပါပဲ။ ဂိုးသမား နူအာ Neuer လကျစှမျးပွခဲ့လို့ ဂိုးမပေးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ မိနဈ(၇၀)နောကျပိုငျးမှာတော့ ဆှီဒငျတို့ ခံစဈသကျသကျကစားခဲ့ခြိနျမှ ဂြာမနီ အခှငျ့အရေးတှေ ပွနျရခဲ့ပွီး ဆှီဒငျ ဂိုးသမား အျောလျဆနျ Olsen နဲ့ ခံစဈကစားသမားတှေ အသညျးအသနျကာကှယျခဲ့ရတယျ။ ဘရနျ့တျ Brandt ရဲ့ ကနျခကျြ တိုငျထိခဲ့ပွီး၊ ဂိုးမကျဇျရဲ့ အပိုငျခေါငျးတိုကျခကျြကို အျောလျဆငျ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးအောငျ ကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဂြာမနီအသငျးအနနေဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားက စပိနျအသငျးရဲ့ လမျးစဉျကို လိုကျရဖို့ နီးစပျခဲ့ပမေယျ့ Injury Time နောကျဆုံးမိနဈမှာ ကရူးဈက လှပတဲ့ Free Kick ကနျခကျြနဲ့ အနိုငျဂိုးသှငျးခဲ့လို့ အုပျစုက တကျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြပွနျရှငျသနျလာခဲ့တယျ။
by Naing Linn . 12 mins ago